Izindaba - Yini okufanele ngiyenze ngemuva kokuthi ngigonywe ngokuphelele i-COVID-19?
Yize iningi lethu lilinde ngokulangazelela usuku lapho singahlelela i-aphoyintimenti yokugoma i-COVID-19, lolu suku lungase lube ngaphambi kwesikhathi kunokuba ucabanga. UMbusi uGavin Newsom (Gavin Newsom) uthe kusukela ngomhlaka-15 Ephreli, bonke abantu baseCalifornia abaneminyaka engu-16 nangaphezulu bangenza i-aphoyintimenti yomuthi wokugoma we-COVID-19 oqala ngo-Ephreli 1, 50 no-50 ubudala. Abantu abangaphezu kweminyaka yobudala bazokwazi ukwenza ama-aphoyintimenti ngokushesha.
Ezweni lonke, uMongameli Biden umemezele ukuthi wonke umuntu omdala e-United States uzokwazi ukuthola umuthi wokugoma ngaphambi kukaMeyi 1, "Inhloso ukusondeza iMelika emazingeni ajwayelekile ngoJulayi 4."
Ngakho konke lokhu engqondweni, ungahle uzibuze: yini ongayenza ngemuva kokugonywa ngokuphelele? Futhi, mhlawumbe okubaluleke kakhulu, yini okungafanele uyenze?
Kubalulekile ukwazi ukuthi ngeke uvikeleke ku-coronavirus ngokushesha ngemuva kokugoma kokuqala. Lokho kungenxa yokuthi kuthatha isikhathi somzimba wakho ukwakha ama-antibody adingekayo, angakuvikela ku-COVID-19.
Ngokusho kweCenters for Disease Control and Prevention, uthathwa ngokuthi “uvikeleke ngokuphelele” futhi “ugonywe ngokuphelele” emasontweni amabili ngemuva kokuthatha umuthi wokugoma iPfizer BioNTech noma iModerna COVID-19 okwesibili, noma amasonto amabili ngemuva komuthi owodwa wokugoma ”Johnson & Johnson (Johnson & Johnson / Janssen) umuthi wokugomela i-COVID-19.
Ngakho-ke ukuzivikela kwakho kwakunjani ngaphambi kwalokho? Ngemithi yokugoma iModerna ne-Pfizer-BioNTech, umthamo wokuqala uzokunikeza ukuvikeleka okukhulu ezifweni ezibucayi, kanti umthamo wesibili uzokusa lapho. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe bakholelwa ukuthi umthamo wesibili unganweba ubude bomuthi wokugoma.
UWachter uthe ezinsukwini eziyi-14 ngemuva kokugonywa kokuqala kweModerna noma iPfizer-BioNTech, uvikelekile ngesilinganiso esingu-80%. (Uma ufuna ukucabanga ukweqa umthamo wesibili, khumbula ukuthi isivivinyo somuthi wokugoma ngamazinga amabili, ngakho ukuqonda kwethu umphumela wokugoma kuncike emithamo emibili.)
Umthamo owodwa kaJohnson / Johnson unikela ngokuvikelwa okuphelele okungama-66% ngemuva kwamasonto amabili. Ngemuva kwezinsuku ezingama-28, ingavimbela ngempumelelo izifo ezinzima noma ezinzima ngomphumela wama-85%. Funda kabanzi mayelana nokuthi amasosha omzimba aqala kanjani ngemuva kokugoma.
UDkt. Peter uthe: “Kubaluleke kakhulu ukulinda emasontweni amabili ngemuva komjovo wokugcina, ngoba akuwona wonke umuntu ofanayo, futhi yize abanye abantu bethola izinzuzo ezithile kusenesikhathi ngokwakhiwa kwamasosha omzimba alwa namaprotheni ama-spike, akulona iqiniso Lokhu akulona iqiniso kubantu abaningi. ” Chin-Hong, uprofesa wezokwelapha nezifo ezithathelwanayo e-UCSF.
“Asazi ukuthi ngubani ozosheshe athole impendulo ye-antibody. Ngakho-ke, kunikezwa isikhathi sewindi lamasonto amabili esinikezwa wonke umuntu ngemuva komjovo wokugcina, okusinika ukuzethemba ukuthi siziphathe njengabantu abasezivivinyweni zokwelashwa, ”kusho yena.
Uhlobo olufushane: Nikeza umuthi wokugoma isikhathi esithathayo ukuvikela umzimba wakho ku-COVID-19. Udinga ukuthatha umuthi amasonto amabili ukuthola umuthi wokugoma ngokuphelele.
Ngokwe-CDC, yize izifundo zokuqala zikhombisile ukuthi abantu abagonywe ngokuphelele mancane amathuba okuthi balidlulise leli gciwane ngokungenazimpawu, lisaqhubeka. Yingakho sikhuluma ngabantu abagonyiwe kwesinye isikhathi abasadinga ukuthatha izinyathelo zokuzivikela.
UDkt Chin-Hong uthe: “Manje kunobufakazi obuningi bokuthi akukwazi ukuthi abantu abagonyiwe abagonywe ngokuphelele bangasakazeka kubantu abangakagonyiwe. Kodwa-ke, ithuba lilonke lincane kakhulu, ”kusho uDkt Chin-Hong. .
Ngakho-ke, njengayo yonke imicimbi esiwubhadane, kuhle ukuqhubeka ngokuqapha ukuvikela abangani bakho, umndeni wakho, nomphakathi omkhulu, bese ulandela imihlahlandlela engezansi.
Uhlobo olufushane: Asinaso isiqiniseko sokuthi ukugonywa ngokuphelele ku-COVID-19 kuzokuvimbela ekusakazeni igciwane. Ngakho-ke, kwezinye izimo kusadingeka uthathe izinyathelo zokuqapha.
I-CDC yathi ubungozi bomuntu ogonywe ngokuphelele one-COVID-19 “buphansi” -kodwa okufanele ukwazi ngempela ukuthi yiziphi izimpawu ze-COVID-19.
Uma uvezwa kumuntu osolwayo noma okutholwe ukuthi une-COVID-19, kepha ugonyiwe futhi awunazo izimpawu ezifana ne-COVID, awudingi ukuvalelwa wedwa futhi awudingi ukuhlolwa i-coronavirus. I-CDC ithi kungenxa yokuthi ingozi yokutheleleka incane kakhulu.
Kodwa-ke, uma udalulwa futhi uba nezimpawu, i-CDC ithi kufanele uzihlukanise nabanye futhi wenze ukuhlolwa. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukwazisa umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuthi ugonywe ngokuphelele.
I-CDC ibuye inikeze umhlahlandlela oningiliziwe wabantu abagonywe ngokuphelele abahlala noma abasebenza ezindaweni zokuqoqa noma ezindaweni zokusebenza ezinabantu abaningi.
Ngamafuphi: ingozi yokuthola i-COVID-19 ngemuva kokugonywa ngokuphelele iphansi, kepha qaphela izimpawu.
Yebo ungakwenza! Imikhombandlela ye-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ithi abantu abagonyiwe bangazithola sebengena ezindlini nabanye abantu abagonyiwe bengenazo izifihla-buso nokuqhela emphakathini.
Isibonelo, i-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yathi uma ugonywe ngokuphelele, “akunakwenzeka ukuthi uzomema abanye abangane abagonywe ngokugcwele ukuba bazodla isidlo sangasese ekhaya lakho.”
Kodwa-ke, iCDC isakhuthaza abantu abagonywe ngokuphelele ukuqoqa le mibuthano komunye umkhawulo. Ithi lokhu kungenxa yokuthi “imibuthano emaphakathi noma emikhulu, kanye nemibuthano efaka abantu abangakagonywa abavela emindenini eminingi” izokwandisa ubungozi bokusabalalisa i-COVID-19.
UDkt. Chin-Hong uthe: “Isibalo sibalulekile ngoba kumane nje kuyinani lamakhala nemilomo yabantu abavela emaqenjini ahlukene ayingozi.” “Uma unabantu abaningi (abagonyiwe noma abangagonyiwe), kulapho abantu abaningi abangayiphenduli imishanguzo kanye namathuba okuba maningi amathuba okuthi abantu bathole i-COVID. Ngakho-ke, empeleni lo ngumdlalo wezibalo. ”
Uma ugonyiwe futhi uzithola unemihlangano eminingi, i-CDC incoma ukuthi uqhubeke usebenzise izindlela zokuvikela ze-COVID-19, kufaka phakathi ukukhosela nokuhlala kude nomphakathi.
Ngamafuphi: kuyingozi encane ukuthi umuntu ogonyiwe ahlangane nalowo ogonyiwe, kepha kusazogcina iqembu lakho lincane.
Ngokusho kweCenters for Disease Control and Prevention (CDC), uma wena (umuntu ogonywe ngokuphelele) uvakashela ikhaya lomuntu ongagonyiwe, kufanele ukwazi ukuvakashela kubo ngaphakathi futhi ngaphandle kwesifihla-buso. Ngamanye amagama, inqobo nje uma abantu abangakagonywanga bengekho engcupheni enkulu yokuthola i-COVID-19.
Ngisho noma omunye wabantu abangagonyiwe eyiqembu elinobungozi obukhulu, wena (umuntu ogonyiwe) usengabavakashela ngaphakathi ezindlini, inqobo nje uma usebenzisa izindlela zokuvikela ze-COVID-19, njengokugqoka imaski eqinile nokugcina okungenani amamitha ayisithupha kude , khetha indawo enomoya omuhle bese ugeza izandla zakho. Uma uvakashela nabantu abangagonyiwe abavela emindenini eminingi, lesi seluleko siyasebenza futhi.
Futhi, njengoba kushiwo ngaphambili, uma uba nomhlangano ophakathi nendawo noma omkhulu nabantu abaningi (kungakhathalekile ukuthi bagonyiwe noma cha), kufanele uqhubeke nokuthatha izinyathelo zokuvikela i-COVID-19, njengokukhishwa emphakathini kanye nemaskhi.
Kukhona i-infographic ephathekayo phezulu kwe-CDC ebala lezi zimo. Kungani ungayilondolozi efonini?
Isitatimende esifushane: Uma kungekho muntu osengozini enkulu, ungahlala nomndeni ongagonyiwe, ungagqoki imaski noma ugcine ibanga lakho. Kukhona nezinye izinto okufanele uzinake.
Muva nje, izifunda eziningana zeBay Area zingene esikalini se-orange, okukhombisa ukuthi ingozi yokudluliswa kwe-coronavirus "iphakathi." Lokhu kusho ukuthi abantu bangabuyela ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini, ezindaweni zokudlela, nasezikhungweni zokuzivocavoca umzimba, noma ngabe bakutholile yini ukugoma noma cha, ngaphandle kwamandla alinganiselwe alezi zindawo.
Ngamanye amagama, noma ngabe ugonywe ngokuphelele, kufanele uqhubeke nokwenza imikhuba yezempilo yomphakathi, "kufaka phakathi ukugqoka imaski, ukugcina umzimba wakho uqhele (okungenani izinyawo eziyisithupha), ukugwema izixuku, ukugwema izindawo ezingenamoya, ukukhwehlela nokuthimula", futhi Geza izandla zakho njalo. “Ngokwesiqondiso seCDC.
Uhlobo olufushane: uma ivulekile, ungaya! Kodwa-ke, njengoba namanje singenaso isiqiniseko sokuthi abantu abagonyiwe ngeke bayisabalalise i-COVID-19, kusamele sithathe izinyathelo zokulwa namagciwane, njengokugqoka izimaski nokuqhelelana.
Kuze kube manje, iCDC ayikabuyekezi umhlahlandlela wayo wokuhamba. UMnyango Wezempilo Yomphakathi waseCalifornia useluleka izakhamizi ukuthi zingahambi ngaphezu kwamamayela ayi-120 ukusuka ekhaya ngaphandle uma kungokwezinhloso eziyisisekelo.
I-CDPH futhi ivimbela ngqo izivakashi ekuhambeni noma ezokungcebeleka, ngakho-ke kungadingeka ukuthi ulinde ukubhuka leli holide kuze kushintshe imihlahlandlela esemthethweni.
UDkt. Chin-Hong wase-University of California, eSan Francisco uthe isizathu sokuthi i-CDC ingakhiphi umhlahlandlela omusha wokuhamba kungenzeka senzeke-ngoba ungahlangabezana nenani elikhulu labantu abagonyiwe nabangagonyiwe lapho behamba-futhi ukubaluleka kophawu.
Uthe: "Ngesikhathi sokuqubuka kwezifo ezahlukahlukene e-United States, abafuni ukugqugquzela ukuhamba." “Ngenxa yokuthi ukuhamba nokuvakasha bekulokhu kuhlobene nokwanda kwangaphambilini e-United States, banethemba lokuthi… ngeke bakukhuthaze lokhu kulesi sikhathi esibucayi. Uhlobo lomsebenzi. ”